स्वास्थ्य Archives - Page 144 of 165 - Purbeli News
यस्ता रोगहरुका लागि काल हो चिप्ली भिण्डी !
एजेन्सी । भिण्डी निकै नै लोकप्रिय तरकारी हो । प्राय सबै ठाउँमा पाईँने भिण्डी तरकारी एवम् अचार बनाएर खाईन्छ । यो खानुमा जति स्वादिष्ट छ, त्यति नै गुणकारी पनि छ । हामीले भिण्डीलाई स्वादका आधारमा तथा यसको चिप्लोपनाका आधारमा स्वादिष्ट तरकारीको रुपमा मात्र उपयोग गर्दै आएका छौँ । पोषण विज्ञहरुका अनुसार भिण्डी मधुमेह रोगीका लागि निकै लाभदायक हुन्छ। भिण्ड...
सबैले फ्याक्ने अनारकाे बाेक्रा कती लाभदायक , खतरनाक राेगहरू क्षणभरमै चट पार्छ
अनारको दानाको जति फाइदा छन्, त्यति नै गुणकारी हुन्छ यसको बोक्रा । अनारको बोक्रालाई सुकाएर त्यसको पाउडर बनाउँनुहोस् र सिसाको बट्टामा राख्नुहोस् । वा त्यसलाई पिसेर रस बनाएर राख्नुहोस् । मुटु रोगबाट बचाउँछ – अनारको बोक्रामा धेरै एन्टिओक्सिडेन्ट हुन्छ, जसले मुटुको रोगबाट बचाउँछ । साथै यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई पनि कम गर्छ । १ चम्चा अनारको बोक्राको ...
सावधान ! यस्तो अवस्थामा यौन सम्पर्क नगरौं
सुखी दाम्पत्य जीवनको लागि यौन अत्यावश्यक कुरा हो । तर पनि कतिपय यस्ता अवस्था हुन्छ, जतिबेला यौन सम्पर्क राख्नु सहि हुँदैन । दाम्पत्य जीवन सुरु गरिसकेका वा नगरेका सबैको लागि यो जनाकारी आवश्यक छ अन्यथा समस्यामा परिन्छ, जब समस्या पर्छ तब पछुताएर पनि केहि फाइदा हुँदैन । तल दिईएको जानकारी पढ्नुहोस् १. आपसी सहमति र इच्छा बिपरित यौन सम्पर्कका लागि दुब...
के तपाईंको सास गन्हाउछ ? छुुटकारा पाउन अपनाउनुहोस यी ६ उपाय
मुख गन्हाउने अर्थात् सास गन्हाउने समस्याका कारण धेरै मानिस पीडित हुन्छन् । सास गन्हाउने समस्या भएका व्यक्ति अरु व्यक्तिसँग बोल्दा पनि मुख हातले छोपेर बोल्नुपर्ने हुन्छ र ठाडो सिर पारेर बोल्नै गाह्रो हुन्छ । सास गन्हाउने मान्छेको नजिक पर्न अरु मान्छेले पनि रुची देखाउँदैनन् ।प्रसस्त पानी पिउनु, नियमित दाँत माझ्नु तथा व्यायाम र सन्तुलित भोजन सास गन्हा...
तपाईलाई गर्भ रोक्न मन छ ? यो फल खानुहोस्
काठमाडौं। एक यस्तो फल छ, जसले नचाहेको गर्भ रहन रोक्छ । भिटामिनका रुपमा प्रयोग हुने मेवाले मानिसले नचाहेको गर्भ रोक्ने पनि काम गर्छ । यसले कैयौं पेट सम्बन्धि रोगहरु पनि ठीक गर्छ । डाक्टरको कुनै सल्लाहबिना नै हामी नचाहेको गर्भ रोक्न सक्छौं । यसै कारण पनि गर्भवती महिलालाई मेवा खान दिइँदैन । गर्भधारण रोक्नका लागि हामी मेवाको बिँयाको प्रयोग गर्न सक्छौं...
प्रतिष्ठानकाे महंगा उपकरण बिग्रीएपछि बिरामिहरू समस्यामा
धरान / एसियाकै सबैभन्दा ठूलो अस्पतालको रुपमा लिइएको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गर्दा प्रयोग गरिने उपकरणहरु विग्रिएपछि विरामीहरु मारमा परेका छन् ।प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभागमा रहेको सिटीस्क्यान, इन्डोस्कोपी र एमआरआई उपकरण विग्रिएपछि अहिले विरामीहरु महंगो शुल्क तिरेर बाहिरका अस्पतालहरू धाउन बाध्य बनेका छन । एक महिन...
बिहिबार, जेठ ११, २०७४
काँकडभिट्टा / मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुर झापामा आजदेखि सघन उपचार कक्ष सुरु भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा चार श्यया र दुई भेन्टिलेटर रहेको सघन उपचार कक्ष सुरु भएको हो । रु ८० लाखको लागतमा सञ्चालनमा आएको सेवामा डा जोसनलाल वज्राचार्यको नेतृत्वमा दैनिक सात स्टाफ नर्सले सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राम कट्टेलले बत...
घाममा अनुहार डढ्न नदिन यसो गर्नुहोस
यतिखेर कडा घाम लाग्छ । थौरै घाममा निस्कँदा पनि अनुहारको छाला डढ्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले सक्दो घाममा ननिस्कन पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैलाई लाग्छ । तर, घाममा ननिस्किएर दैनिकी चल्दैन । चिसो मौसममा भन्दा गर्मीमा छालामा देखिने समस्या फरक हुन्छन् । गर्मीमा छाला कालो हुने मात्रै होइन, चायाँपोतो आउने र अनुहारमा कालो धब्बा बस्ने समस्या हुन सक्छ । छालामा चिल्ल...
चितवन । भरतपुर अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सुरु गरेपछि उपभोक्ताले सात गुणासम्म सस्तोमा औषधि पाउन थालेका छन् । सरकारी अस्पतालमा आफैँले फार्मेसी सञ्चालन प्रक्रियागत रुपमा जटिल भए पनि क्रमशः व्यवस्थापन हुँदै जाँदा उपभोक्ता र अस्पताल दुवैले लाभ लिन पाएका हुन् । अस्पतालको फार्मेसी स्टोर प्रमुख राजकुमार ढुङ्गानाका अनुसार बजारमा रु १०० पर्ने स्लाइन लगाउँद...
भुलेर पनि नगर्नुस् यी १० काम, मृगौला खत्तम हुन्छ !
किडनी अर्थात मृगौला शरीरको निक्कै महत्वपूर्ण अंग मध्ये एक हो । यसले शरीरमा रगत सफा गर्ने देखि, हार्मोन बनाउने, खनिज सोक्ने, मुत्र उत्पादन गर्ने, टक्सिन अर्थात खराव पदार्थहरुलाई शरीरबाट निकाल्ने तथा एसिडको सन्तुलन बनाउने जस्ता काम गर्छ । यहाँ हामीले दैनिक जीवनमा गर्ने १० गल्तीको चर्चा गरिएको छ जसले मृगौलालाई हानी पुर्‍याउँछ । १. पानी कम पिउने यदि ...